Wax ka Baro Ciyaartoyada Ugu Dheer iyo Kuwa Ugu Gaaban Ee Kubada Cagta
HomeWararka MaantaWax ka Baro Ciyaartoyada Ugu Dheer iyo Kuwa Ugu Gaaban Ee Kubada Cagta
Xidigaha dunida ka caanka ah ayaa qaarba ku caan baxeen arimo kala duwan, hadaba ma laga yaaba inay jiraan xidigo ku caan baxay dhererkooda oo aan saaamayn badan ku lahayn kubada cagta dunnida, hadaba Qoraalkeenan ayaanu ku eegi doonaa maanta xidigaha ugu dheer iyo kuwa gaabnaa ee kubada cagta dunnida.
Ciyaar yahaada Ugu Dheer Laacibiinta Kubada Cagta
1# Kristof Van Hout : xidiga Kristof Van Hout ayaa ah xidiga ugu dheer laacibiinta kubada cagta isagoo dhererkiisu dhan yahay 2.08 m oo u dhiganta 6 ft iyo 10 Inche. Xidigan ayaa ku dhashay wadanka Belgium-ka 1987kii, waxaanu ka ciyaaraa booska gool-wadaha, isagoo u safta kooxda K.V. Kortrijk ee ka dhisan wadanka Belgiumka.
2# Yang Changpeng: xidiga Yang Changpeng ayaa u dhashay wadanka China, waxaanu ka saftaa booska weerarka waxa uu dhererkiisu dhan yahay 2.06m ama 6 ft iyo 9 inche. Waxa uu u ciyaaraa kooxda Chengdu Blade ee kadhisan wadanka China taas oo uu ku biiray sanadkii 2010-ka.
3# Vanja Ivesa: Xidigan ayaa dherer ahaan lamid ah Yang Changpeng waxaanu dhererkiisu yahay 2.06m, waxa uu kasoo jeedaa wadanka Yugoslavia waxaanu ku dhashay wadankaasi sanadkii 1977-kii.
Waxa uu bilaabay kubada cagta sanadkii 1999-kii isagoo u saftay kooxaha Sydney United Nk Zminj iyo kooxda Eskisehirpor oo uu hada u ciyaaro.
Xidigaha Ugu Gaaban Ciyaartoyada Kubada Cagta
1# Jafal Rashed Al-Kuwari: xidigii hore ee xulka qaranka Qatar Jafal Rashed Al-Kuwari ayaa hogaaminaya liiska laacibiinta ugu gaaban dherer ahaan ciyaartoyga kubada cagta. Xidgan ayaa hadaba dhererkiisu dhan yahay 1.55 m oo u dhiganta 5 Ft iyo 1 Inch, waxa uu dhashay sanadii 1972-kii, waxaanu ka ciyaari jiray khadka dhexe. Jafal Rashed Al-Kuwari ayaa noloshiisa u hibeeyay kooxda Al Sadd Club kaas oo ka fadhiistay sanadkii 2009-kii, waana Gudoomiyaha kooxdaasi ee wakhti xaadirkan.
2# Élton Jose Xavier Gomes: Xidigan Gomes oo dhalasho ahaan kasoo jeedaa dalka Brazil ayaa dhererkiisu dhan yahay 1.57 M, waxaanu kasoo ciyaaray kooxo badan sida, Corinthians Club, Sao Caetano, Steaua Bucuresti, Al Nasr, Dubia Club iyo kooxdiisa hada uu u safto ee Al Fatel.
3# Daniel Villalba: xidigan reer Argentina ayaa dhererkiisu yahay 1.57 m, waana xidig ka ciyaara weerarka, waxaanu markii ugu horeysay u ciyaaray 2007 dii xulkiisa da’da 15 jirada, waana laacib xirfad ahaan sareeya oo da’yar, kaas oo 24 jir ah.
Taariikh Kooban Cayaaryahanka Vincent Enyeama